Kulan looga hadlayo arrimaha Dastuurka iyo dhameystirkiisa oo ka furmay Muqdishu – Kalfadhi
September 15, 2019 September 15, 2019 Hassan Istiila
Wasiirka wasaaradda arrimaha Dastuurka ee XFS Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta magaalada Muqdishu ku daah-furay banbax-howleed socon-doono muddo seddex maalin ah, kaas oo looga doodi doono qorsho-howleedyada u degsan hay’adaha dib-u-egiista dastuurka.
Wasiirka ayaa ku dhawaaqay in sedaxda hay’adood oo kala ah, Wasaaradda,Gudigga La-socodka Dib-u-eegista Dastuurka, Gudigga Madaxabanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ay ka go’antahay dhameystiro dastuurka.
“Waxaa naga go’an hadaanu nahay seddexdan hay’ad in howlaha dastuurka aysan iska noqon arrimo iska furan oo ah mashruuc la iska quuto, waxaan dooneynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ee ugu macquulsan loo dhameystiro dastuurka”. Wasiir Saalax ayaa sidaasi yiri.
Waxa uu wasiirka uu tilmaamay in kulankan furmaydiiradda lagu saari doonno sidii arrimaha Dastuurka iyo dhameystirkiisa.
Muumino Sheekh Cumar oo ah Gudoomiye Ku-Xigeenka Gudigga Madaxabanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ayaa dhankeeda sheegtay in ka guddi ahaan ay aad ugu faraxsanyihiin ka qaybgalka kulankan, waxaa kale oo ay xustay in gudigga madaxbanaan uu shirka ku soo bandhigi doono waxqabadkiisa iyo waxa u qorsheysan.